SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: သတ်ကွင်း (ကျော်သူ)
ရေးသားသူ ။ ။ moethaukkye Tuesday, February 9, 2010 Labels: ကျော်သူဒဿန3comments
အပေါ်ကရန်သူကို အောက်သို့ ရောက်လာအောင် ဖျားယောင်း၊ အောက်က ရန်သူကို အပေါ်သို့ရောက် လာအောင် မြူဆွယ်၊ အရပ် (၈) မျက်နှာ က ရန်သူများကို တည်ကြက်လုပ်ပြီး ကျုံးသွင်း၊ စသဖြင့် . . . ဖျားယောင်းခြင်း၊ မြူဆွယ်ခြင်း၊ ကျုံးသွင်းခြင်း၊ မှိုင်းတိုက်ခြင်း၊ ချောင်ပိတ်ခြင်း၊ ထောင်ခြောက်ဆင်၍ ရန်သူကို အမိအရ ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ လုပ်ရန် အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်သည်။
ရန်သူတို့သည် ကျွန်တော်၏ ပစ်မှတ်အတွင်းသို့ ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော်၏ သွေးသောက်များ၏ အင်အားတစ်ရပ်ထဲနှင့် ထိုရန်သူတို့ကို နှိမ်နှင်း၍မရ။ အများအား၊ ပြည်သူ့အားနှင့် တက်ညီ လက်ညီ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ သစ္စာသွေးသောက်ပြီး ရဲရဲတောက် နှိမ်နင်းမှရမည့် ရန်သူပင်ဖြစ်သည်။
ဤရန်သူသည်...အတ္တကြီးသည်၊ ရက်စက်သည်။ မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒသုံးသည်၊ သွေးထိုးတတ်သည်၊ သပ်ရှို တတ်သည်၊ အကောက်ကြံတတ်သည်။
လူမျိုးတုံးအောင်လုပ်မည့်ရန်သူ၊ အမျိုးဖျက်မည့်ရန်သူ၊ သာသနာဖျက်မည့်ရန်သူ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည့် ရန်သူ. . . မည်သို့သောရန်သူဖြစ်စေကာမူ . . . ကျွန်တော်တို့စည်းလုံးမည်၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမည်။ လက်တွဲမဖြုတ်၊ ကြံ့ခိုင်မှုရှိမည်ဆိုပါက ချေမှုန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ နှိမ်နှင်းခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ကျုံးသွင်းခြင်းစသည့် စကားလုံးများကို သုံးခြင်းမှာ ကျွန်တော် နိုင်ငံရေးလုပ်နေခြင်းမဟုတ်၊ နိုင်ငံရေး လှုံဆော်စာလည်းမဟုတ်၊ အရေးအခင်း ဖြစ်အောင်လုပ်မည့်သူ မဟုတ်၊ ဆူပူနှောက်ယှက်မည့်သူမဟုတ်။
သို့သော် . . . နိုင်ငံရေးကောင်းလျှင် လူမှုရေးသမားများသက်သာမည်၊
လူမှုရေးဆိုသည်မှာ ရိုးစင်းသည်။ ဖြူစင်သည်။ ဖြောင့်မတ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းသည်။
သို့သော် . . . ဖြူစင်ဖြောင့်မတ်၊ ရိုးသား၊ တည်ကြည်၊ ငြိမ်းချမ်းသော လူမှုရေးလုပ်ငန်းကို အမဲဆိုး၊ (အနက်ရောင်ဆိုး) မည့် ဒိဋ္ဌိအယူဝါဒသမား၏ ဖျက်ဆီးမှု၊ တိုက်ခိုက်မှု၊ နှောက်ယှက်မှုများရှိနေသည်။
သူတို့ . . . သူတို့သာလျှင် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖျက်ဆီးမည့် ဘုံရန်သူဖြစ်တော့သည်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်တော်ရိုးသားစွာ အဖြူထည် လူမှုရေး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို တင်ပြခဲ့ဘူးပါသည်။ ကုသိုလ်ယူရမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်များပွားများရေး၊ ဗြဟ္မစိုရ်တရား (၄) ပါးလက်ကိုင်ထားရေး၊ သီလလုံရေး၊ အယူသည်းမှုပပျောက်ရေး၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူရှိသူများ အကြောင်း . . . များစွာ၊ များစွာ ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ပြည်သူပြည်သားများနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာလူမျိုးတော်တော် များများသည် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူဝါဒသမား၏ အယူစွဲ၊ အမှားစွဲ၊ အယူသည်းမှုများကို သိရှိပြီးဖြစ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ ရန်သူကို မြင်နေရပြီဖြစ်သည်။ ထိုရန်သူတို့၏ ပရိယာယ်ကြွယ်မှု၊ သပ်ရှိုမှု၊ ဖြားယောင်း သွေးဆောင်မှု၊ လက်တွင်းသို့ မရောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ အထူးသတိထားရမည်။ စိတ်ဓာတ် တို့ကို ကြံ့ကြံ့ခိုင်ကာ ရဲရဲရင့်ရင့်တွန်းလှန် တိုက်ဖျက်ရတော့မည်။ ရန်သူအား အမြစ်ပါမကျန် တိုက်ခိုက်ရ တော့မည်။
ပစ်မှတ်ကိုသိလျှင် ထိအောင်ပစ်ဖို့က မိမိတို့တာဝန်ပင်ဖြစ်တော့မည်။ မိမိတို့၏ ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပမှာရှိတဲ့ ကိလေသာဟူသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒ ရန်သူတို့ကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိသည့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများက စည်းလုံးညီညွတ် လက်တွဲမဖြုတ် စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခိုင်၊ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန် အချိန် ရောက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါမှ . . . “ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟေ့”ဟု ရင်ကော့၍ မော်ကြွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အများကတော့ ကျွန်တော်သည် ကုသိုလ်တွေ အများကြီးရနေပြီဟု ထင်ကြပါသည်။
သို့သော် . . . ကျွန်တော်သည် ကုသိုလ်တစ်ပဲ . . . ငရဲတစ်ပိဿာရနေပြီဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော် လုပ်နေသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ချက်များသည် အများအကျိုးအတွက် ထမ်းရွက်လုပ်ဆောင်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဤကောင်းမှုလုပ်ငန်းကြီးတွင် နှောင့်ယှက်သူ၊ ဟန့်တားသူ၊ တားမြစ်သူ၊ ဖျက်ဆီးသူမှန်သမျှကို လေလှိုင်းမှ တစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာပေထက်မှသော် လည်းကောင်း၊ FACEBOOK မှသော်လည်းကောင်း၊ ကာယကံ၊ ဝဇီကံ၊ မနောကံတို့ဖြင့် ပြန်လည်ဖြေရှင်း တုန့်ပြန်မှုများကို လုပ်ခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ အကုသိုလ်များပင် ရခဲ့သည်။ အပယ်သို့ လားတော့မည်လား . . . မသိ။
သို့သော် ကျွန်တော်တို့၏ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ပြည်သူလူထုအား ပြောကြားထားသော စကားစုအရ . . .
“သုဂတိသွားရာ တံခါးပေါက်သည် မည်မျှပင် ကျဉ်းမြောင်းသည် ဖြစ်စေ ယမမင်း၏ ခွေးရည်ပုရပိုက်၌ ငါ၏အပြစ်တွေ မည်မျှပင် ရေးမှတ်ထားသည် ဖြစ်စေ ငါကားဂရုမပြု” ဟူသောစာပိုဒ်သည် ကျွန်တော့်အတွက် မဟာအားဆေးတစ်ခွက်ပင် ဖြစ်တော့သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ ဘုံရန်သူဖြစ်သော အယူမှား၊ အစွဲမှား၊ ဒိဋ္ဌိဝါဒများအား သိရှိပြီးသည်နှင့်အညီ ကျွန်တော်တို့၏ သတ်ကွင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်နေသော ရန်သူတို့ကို ဇွဲရှိရှိ၊ သစ္စာရှိရှိ ဥမကွဲ၊ သိုက်မပျက်၊ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ တိုက်ခိုက်တွန်းလှန် ဟန့်တားကြမည်ဆိုပါက ငြိမ်းချမ်းသာယာ စိုပြည်လှပသော လူ့ဘုံတစ်ရပ် ပျော်ရွှင်ဖွယ်၊ နေချင်ဖွယ် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း . . . ။
(မှတ်ချက် ။ ။ ကျော်သူ၏ ရေးသားချက် ဟုတ်မဟုတ် အငြင်းပွါးမှု အချို့ ရှိနေပါသည်။ စာဖတ်သူများကိုယ်တိုင် စဉ်းစားသုံးသပ် လေ့လာနိုင်ရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။)
Posted by saffrontoward at 6:53 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းမထုတ်ပြန်မှုအ...